अनौठो होली : जहाँ अबीर दलेर छानिन्छ दुलही ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
अनौठो होली : जहाँ अबीर दलेर छानिन्छ दुलही !
रङ्गको पर्व होलीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले मनाइने प्रचलन छ । होली पर्वमा सामान्यतया एक आपसमा रङ लगाएर उमंगकासाथ मनाइन्छ । संसारमा यस्ता कति स्थानहरू पनि छन् जहाँ अनौठो तरिकाले होली मनाइन्छ ।
राजस्थानको पुष्करण ब्राह्मण समाजका मान्छेले होलीको दिन रङ नखेली शोक मनाउँछन् । यस दिन कसैले घरको चुल्होमा आगो बाल्दैनन् । न कुनै खाने कुरा घर ल्याउँछन् । यस दिन त्यहाँका मानिसहरू यसरी शोकमा डुबेका हुन्छन् की घरकै कोही सदस्यको मृत्यु भएको छ ।
यस्तो गर्नुको पुरानो मान्यता पनि रहेको छ । होलिका दहन गर्दा एक महिला बच्चा लिएर होलिका परिक्रमा गर्दै थिइन् । सोही बेला उनले बोकेको बच्चा आगोमा खासे, बच्चालाई बचाउन ती महिला आगोमा हाम फालिन् । उनले बच्चा त बचाउन सकिनन् आफूले पनि अन्तिम श्वास लिइन् । प्राण जाने बेलामा ती महिलाले अब देखि होलीमा कसैले खुसीयाली नमनाउनु भन्दै देह त्याग गरिन् । यस कारणले उक्त समुदायमा होलीको दिन शोक मनाउने चलन रहेको छ ।
राजस्थानकै बांसवाडमा बस्ने जनजातिले अबिरमा होलिका जलाएको खरानी मिसाएर होली खेल्ने चलन छ । यति मात्र नभई उनीहरू अगुल्टोमा हिँड्ने समेत गर्छन् भने एक अर्कालाई ढुङ्गाले समेत हान्छन् । यसरी होली मनाउँदा मानिसको शरीरबाट निस्किने रगतले अबको आउने समय राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता उनीहरूमा रहेको छ ।
यसै गरी भारतको मध्य प्रदेशको मालवामा बसोबास गर्ने आदिवासीले जीवनसाथी चुन्ने दिनको रूपमा होली मनाउँछन् । यस दिन पुरुषले आफूलाई मन परेको महिलालाई अबिर लगाइदिन्छन् र महिलाको तर्फबाट प्रस्ताव स्वीकार भएमा महिलाले पनि अबिर लगाइदिन्छन् ।
यसै गरी कनार्टकमा होलीको दिन एक ठाउँमा भेला भएर आगो बालिन्छ । आगो बाल्न प्रयोग भएको अगुल्टो एक अर्कामा फ्याँकेर होली मनाइन्छ । यस मान्यता अनुसार यस्तो गरेमा होलिकाको अन्त्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
यसै गरी हरियाणाको एक गाउँमा होली पर्व मनाइँदैन । भनिन्छ, यस गाउँलाई एक बाबाले श्राप दिएका छन् । ती बाबा रिसाएर होलिका दहनको आगोमा हाम फालेर प्राण त्यागे । आगोमा जल्दै गरेका बाबाले यस गाउँमा अब होली मनाएमा अपसगुन हुने भनी श्राप दिएका थिए जसका कारणले होली पर्व अहिलेसम्म मनाइँदैन ।